Advertising | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Anarana marika marika: miisa. Marika malaza sy ny logo
Androany, anarana marika malaza no eo am-bavan'ny olona rehetra. Mahazatra azy ireo isika ary tsy mieritreritra ny hoe nisy namorona ireo anarana ireo indray mandeha, fa ao aoriany ...
Ronald McDonald - mascot an'i McDonald
Iza i Ronald McDonald? Ity dia badina izay mascot an'ny orinasan'i McDonald malaza eran-tany. Raha ny fikarohana natao tamin'ny 2001 nataon'ny mpanoratra ny boky "Fast Food Nation", Ronald McDonald (jereo ny sary etsy ambany) dia ...
Boky marika dia ... Famoronana boky marika. Fampivoarana ny marika
Ny maha-zava-dehibe ny fampivelarana ny maha izy azy dia mitaky fahatakarana bebe kokoa amin'ireo mpandraharaha. Ny fanekena ny orinasa amin'ny alàlan'ny marika, loko, sary famantarana orinasa dia mitondra tombony tena izy. Mba tsy hiankina amin'ny kisendrasendra dia ilaina ny manamboatra tsara ny zava-drehetra ...
Inona no atao hoe famerenam-potoana? Karazana retargeting
Mitranga izany aorian'ny fitsidihana ilay tranokala, rehefa afaka kelikely, rehefa miasa indray amin'ny Internet, dia miseho ny dokambarotra momba ireo entana sy serivisy izay efa hitan'ny mpampiasa. Ahoana ny fomba hijerena izany: kisendrasendra sa fanenjehana? Tsia, ...
Ny tombony azo anaovana dokambarotra amin'ny karazana dokambarotra hafa
Isan'andro dia mandany ora maro amin'ny Internet ny olona hamahana ny asany sy ny fiainany. Tsy mitsaha-mitombo ny mpijery, na amin'ny isa na amin'ny kalitao: tanora, tanora, olona matotra manana karama avo ...
OBEY: inona ity marika ity ary inona ny tantaran'ny namoronana azy?
Te-hiavaka amin'ny vahoaka foana ianao. Na inona na inona vanim-potoana sy toetr'andro ivelan'ny varavarankely dia misy ny faniriana ny ho kanto. Mandritra izany fotoana izany dia tadiaviko ny akanjo sy ny kojakoja tsy ny ...
Iza no mpanamboatra sary?
Ny famolavolana dia iray amin'ireo indostria malaza indrindra eto amintsika. Izay miantso ny tenany ho mpamorona fotsiny: manomboka amin'ny mpamorona tranokala matotra ka hatramin'ny tompony manicure tsotra. Na izany aza, ny tena ...
Sublimation avo lenta avo indrindra
Ny fisian'ny teknolojia fanontam-pirinty vaovao dia manatsara ny kalitaon'ny fanontana sy manitatra ny haben'ny fampiharana azy ireo. Anisan'izany ny fanontana sublimation miavaka, ny votoatiny dia ny fampiharana sary amin'ny vokatra avy ...
Mpiserasera PR an'ny SAMP: haingana sy mahomby
Ny admin ny mpizara vaovao rehetra na ho ela na ho haingana dia manomboka liana amin'ilay fanontaniana hoe: "Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny mpizara GTA: SAMP?" Ny PR an'ny mpizara SAMP dia azo zaraina amina fepetra roa. Ny voalohany, izy no tsotra indrindra, - ...
Ahoana no fanaovana ny afisy amin'ny Photoshop ary ataovy izany
Ahoana ny fomba fanaovana afisy amin'ny Photoshop sa ny tenanao? Fomba iza no tokony hampiasainao? Hodinihintsika amin'ny antsipiriany ireo safidy roa ireo, ary avy eo ny tsirairay dia afaka misafidy izay mety aminy. Ahoana ny fomba fanaovana afisy amin'ny Photoshop Matetika ...
Inona no manaporofo ny fahombiazan'ireo flyers? Volavolan-tserasera Flyer, design, tracking
Androany dia sarotra be ny mandeha amin'ny arabe ary misoroka ny tolotra mba hitondra takelaka fampahalalana miaraka aminao avy amin'ny tanan'ny olona mijoro eo akaikin'ny metro. Io no lasa mahazatra - miverina mody, ohatra, miaraka amin'ny ...
Ny tantaran'ny logo. Logo "BMW", "Skoda", "Audi", "Toyota", "Adidas": inona ny tantaran'ny famoronana
Tokony hiaiky ianao fa eo amin'ny tontolon'ny marika dia vitsy ny logo fantatry ny rehetra, ekena noho ny dokam-barotra maroloko amin'ny fahitalavitra na afisy dokambarotra miloko eny amin'ny arabe ao an-tanàna. Ahoana no niandohan'ny tantaran'ny "logo" ...
CPM - inona izany? Ahoana ny fampiasana CPM amin'ny doka?
Rehefa mikarakara doka na doka amin'ny doka an-dahatsoratra amin'ny tambajotra, misy dokambarotra manao kajy ny tetibola eo ho eo. Zava-dehibe ho an'ny mpanjifa amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokam-barotra ny fahitana ny fizarana ny vola amin'ny fampiharana azy, na lany araka ny tanjon'izy ireo ...
Ahoana no fomba hamoronana ohatra tsara indrindra amin'ny fanaovana dokam-barotra. Fitsipika sy torohevitra
Ny flyer dia iray amin'ireo fomba tsy lafo sy tena mandaitra hampiroboroboana vokatra na serivisy. Izy io dia manatanteraka doka sy fampahalalana ho an'ny mpanjifa. Ary raha ilaina ny fampiroboroboana ...
DIY LED running line: torolàlana amin'ny fanaovana
Raha mijery akaiky ianao, dia misy dokambarotra mihetsika maro loko isan-karazany. Apetraka amin'ny tranobe, takelaka fanaovana takelaka, varavarankely ary kafe ny birao, ary ny sasany mametraka azy mivantana amin'ny varavarankely fiara. Miankina amin'ny ...
Logo: karazana logos. Company logos. Logo creation
Ny hetsiky ny orinasa rehetra dia manomboka amin'ny famoronana mari-pamantarana orinasa, ny singa lehibe ahitàna ny fampiroboroboana sary famantarana. Ity marika ity dia mampiseho ny fananan'ny vokatra na serivisy ho an'ny orinasa iray manokana, mampiseho ny heviny ary ...
Mba hampandrosoana tsara ny orinasanao, na ara-barotra izany, serivisy isan-karazany na zavatra hafa, tsy maintsy mampiroborobo azy voalohany ianao, ataovy izay hahafantarana azy. Ary ny doka dia mitana andraikitra lehibe amin'ity raharaha ity. Izy io ...
Adin-tsarin'ny karazana ad
Nanjary ampahany lehibe amin'ny fiainana andavanandro ny dokam-barotra amin'izao fotoana izao. Manaraka anay izy na aiza na aiza: handeha hiasa, rehefa mandeha manodidina ny tanàna, amin'ny fitaterana, amin'ny fahitalavitra. Iray amin'ireo karazana doka, ...
Ilay teny hoe 'promo'
Ny participle "promo" dia nanjary ampahany amin'ny fiainana andavanandron'ny olona maoderina ankehitriny. Amin'ny lafiny rehetra dia maheno tsy tapaka ny "hetsika-promo" isika, ny akanjo-promo ", ny" site-promo ", ny" souvenir-promo ", ny" promo-videos ", ny" code-promo "- mandeha hatrany ity lisitra ity.
Aforeto - inona izany? Fampahalalana vitsivitsy
Ny hevitra hoe "mivalona" dia avy amin'ny fiteny alemanina, ny teny hoe "aforeto" amin'ny fandikan-teny dia midika hoe "groove", "groove". Ny fotokevitra dia niorim-paka tao amin'ny fiteninay tsy nisy fiovana. Ny famolahana dia ampiasaina amin'ny fanamboarana fanontana taratasy, ohatra, bokikely, ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,539.